Ranomasin-dranomasina Reef Resilience
Fiakaran-tsoratry ny ranomasina-ambony
Ny fisondrotry ny ranomasina any an-dranomasina dia miteraka antony roa lehibe: ny famelarana ny hafanam-po (ny ranomasim-pasan'ny ranomasimbe sy ny fiparitahana), ary ny fandraisan'anjaran'ny gilasy (ohatra, avy amin'ny glacier, ny tany, ny ranomandry, ary ny ranomasimbe) noho ny fitomboan'ny hafanana.
Amin'ny 2100, ny fivoahana ara-pahasalamana sy ny fikajiana glasy dia andrasana hampitombo ny haavon'ny ranomasina amin'ny 0.26 ka hatramin'ny 0.98 metatra (m), mifototra amin'ny modelim-pahaizana momba ny toetrandro sy ny fijerena ireo sehatra avo lenta sy ambany: RCP2.6 sy RCP8.5.ref Na izany aza, ny fampidirana ny volon'ny ranomandry any Greenland sy Andrefana dia mety hampitombo ny fiakaran'ny ranomasina.
Ny fiheverana momba ny firoboroboan'ny ranomasina midadasika kokoa amin'ny taona 21st (relative to 1986-2005) avy amin'ny famintinana ny CMIP5 miaraka amin'ny modely mifototra amin'ny process) ho an'ny emission avoitra (RCP8.5) sy ny sehatra fanondranana ambany (RCP2.6). Ny habetsaham-pitomboana azo raisina dia aseho ho toy ny tarika mahatsiravina. Loharano: IPCC 2013
Mangiran-dratsy eo amin'ny fiovan'ny toetrandro
Ny toeram-ponenana mangatsiaka sy soka-dranomasina dia andrasana ho fiantraikan'ny fiakaran'ny ranomasina. Ny fiarovana ny ala honko amin'ny alàlan'ny sira ambany siramamy mba ahafahan'ny ala honko any an-tanandehibe satria ny fiakaran'ny ranomasina dia natolotra ho tetikady fampifanarahana. Ny fifantohana amin'ny deltas sy ireo sehatra hafa fanamafisana mba ahafahan'ny ala honko sy manitatra azy dia nomena ihany koa. Ny fanoloana ireo tora-pasika tadiavin'ny ala amoron-tsiraka fa tsy tora-pasika mitoka-monina izay mety hanjavona na hodiavin'ny onja sy ny rivotra mahery dia mety hanatsara kokoa ny faharetan'ny sokatra amoron-dranomasina. Ho fampahalalana bebe kokoa momba ny sasany amin'ireto paikady ireto dia jereo Mitantana ny ala honko amin'ny fahantrana amin'ny fiovan'ny toetrandro.
Nandritra ny antsasaky ny taonjato farany, niakatra ny velarantan-dranomasina manerantany noho ny 2-3 mm isan-taona.ref Araka izany, maro ny mpahay siansa milaza fa ny fiakaran'ny ranomasina dia hanana fiantraikany kely fotsiny amin'ny haran-dranomasina satria ny taham-pahavelomana sy ny haben'ny fiakaran'ny ranomasina dia ao anatin'ny tahan'ny fiakaran'ny vidin-javatra (izany hoe ny tahan'ny fitomboana) amin'ny haran-dranomasina maro sy maro Ny vatohara dia eo ambany fifehezan-tseraseran'ny metatra maromaro ankehitriny. ref
Na izany aza, ny fikarohana dia maneho fa na dia mihena aza ny haavon'ny haitao maro (ohatra 2 ka hatramin'ny> 30 mm / taona) mba hikorontana amin'ny fiakarana an-dranomamy isan-taona, dia mety ho ela kokoa ny fihenan'ny fiovaovan'ny haran-dranomasina ny fitomboan'ny zanadranon'ny vatohara. ref Ankoatra izany, ny mpahay siansa koa dia miahiahy ihany koa fa ny loza mitatao amin'ny vatohara (ohatra, mitombo ny mari-pahaizan'ny ranomasina, ranomaso, aretina, ary fanjonoana mihoa-pampana) hampihenana ny fahaiza-manaon'ny haran-dranomasina mba hikorontana amin'ny fiakaran'ny ranomasina. Ny fanamafisana ny ranomasimbe dia mety hampihena be ny fihenan'ny fihenam-bidy sy ny fihenan'ny vatohara, ka mahatonga azy ireo ho sarotra kokoa ny hihinana ny vatohara.
Any amin'ny etona eo an-toerana, ny fitomboan'ny ranomasina dia mety hampitombo ny dingana sedimentary izay mety hanelingelina ny photosynthesis, ny famatsiana, ny fandraisana mpiasa ary ny dingana hafa momba ny vatohara ara-batana. ref Ohatra, mety miteraka lozam-pivoarana izy noho ny fipoahan'ny kilaometatra izay mety hikororosy na hanamaivana ny hazavan'ny masoandro ho an'ny photosynthesis. Mety hampitombo ny fihenan'ny sedimenta amin'ny vatohara ho an'ny vatohara (ny ampahany ao amin'ny vatohara manakaiky ny loharanom-pandrefesana) sy ny 0.2) na dia kely ihany aza ny fitomboan'ny ranomasina (ohatra: 1 m) ny fanodinana amoron-dranomasina sy ny fitaterana fitotoan-tsakafo tsara amin'ny vatohara akaikikaiky. Ny fanodinkodinam-piofanana ny haran-dranomasina dia nitarika ho amin'ny fialana haingana ny vatohara nandritra ny fiakaran'ny hafanam-be tamin'ny ambaratonga ambony (2 m). ref
Ny fisondrotry ny ranomasina eo amin'ny sehatry ny ranomasina ihany koa dia mety handevona sy hanimba ny toeram-ponenana amoron-dranomasina toy ny ala honko sy ny sokatra amoron-dranomasina. Azo atao ny manamboatra ny ala honko raha toa ka mipoitra tsikelikely ny fiposahan'ny ranomasina, raha misy ny habetsaham-pamokarana ampy, ary raha misy sedim-ponenana ampy hanohizana hikisaka hibodo mba hanonerana ny fiakaran'ny ranomasina.
NOAA Mitsangàna ambony ranomasina
Ny fiovan'ny toetrandro sy ny nosy Pasifika: Ny tatitra sy ny fiantraikany amin'ny tatitra momba ny fanadihadiana ny klioba any amin'ny nosy 2012 Pacific (PIRCA)
Ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fanentanana momba ny fiovaovan'ny toetr'andro any Australia
Ny tetikasa Sea South Pacific ary ny tetikasa fanarahamaso ny fikorontanan'ny toetr'andro - ny tatitry ny Pacific Pacific